Linn Ko: April 2013
ဒါကတော့ Android Phone တွေမှာ Office သုံးချင်သူတွေ အတွက်ပါ.... ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 24.23MB ရှိပါ
တယ်.... Internet Download Manager အကူအညီလေး ယူရင်တော့ Download လုပ်ရတာ မြန်မှာပေါ့
ဗျာ...အသုံးလိုမယ့်သူတွေ ယူသွားပါနော်.... Download Link ကို အောက်မှာ ပေးထားပါတယ်.....
Posted by Linn Ko at 2:34 PM No comments:
Huawei နဲ့ပတ်သတ်သမျှ... ( Firmware တင်နည်းများ ... Firmware များ.... )
Huawei နဲ့ ပတ်သတ်တာလေးတွေက အတင်နည်းတော့ ရှာကျန်ပြီး တင်လိုက်ပါတယ်..... သူများတင်
ထားတာကို ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ.... သုံးတယ့် သူတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင်လို့ပါ.... ရှာမတွေ့
တယ့် သူတွေလည်း တစ်နေရာတည်း မှာအသုံးတည့်သွားအောင်လို့ တင်နည်းလေးတွေကော
Posted by Linn Ko at 1:23 PM No comments:
Posted by Linn Ko at 1:05 PM No comments:
ObjectDockâ„¢ isaprogram that enables users to organize their shortcuts, programs and
Posted by Linn Ko at 12:53 PM No comments:
CCleaner ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော် တို့အတွက် မရှိမဖြစ် Software လေးတစ်ခုပါပဲ..... သူက History
File တွေ ဖြတ်လို့ရတယ်.... Recent ဖိုင်တွေ ရှင်းပေးတယ်... ပြီးရင် Registry ဖိုင်တွေကိုလည်း ရှင်းပစ်
လို့ရတယ်... Backup ယူထားလို့ရတယ်.... ပြီးတော့ Uninstall Function လည်း ပါသေးတယ် ဗျ...
Posted by Linn Ko at 12:43 PM No comments:
VLC ဆို မသိသူ မရှိသလောက်ဖြစ်နေပါပြီ.... သုံးဖူးသလောက်တော့ အကောင်းဆုံး လို့ပဲ ညွှန်းချင်ပါတယ် ခင်ဗျ.... သူက Free လဲရတယ်ဆိုတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ.... သူက Video, Audio
ဖိုင်အတော် များများကို Support လုပ်တယ်ဗျ.... အကုန်နီးပါးပါပဲဗျာ....လိုချင်တယ့်သူတွေအတွက်
Android ဖုန်းအတော်များများရဲ့ Mobile Drivers များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဖုန်းအမျိုးအစားနဲ့ကိုက်မယ့် driver များကိုအောက်မှာရွေးချယ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by Linn Ko at 12:26 PM No comments:
Creates CHM files with ease.
With Vole Media CHM you have the possibility to convert DOC files with ease. The
Posted by Linn Ko at 12:25 PM No comments:
Ubuntu isawidely used Linux operating system built byaworldwide team of expert
SONY OFFICIAL FIRMWARE တွေ စုစည်းဖော်ပြပေးးလိုက်ပါတယ် လိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ်။။ ဒါလေးက FIRMWARE (ftf)
CREATED FOR SONY BOOTLOADER LOCKED FROM SUS(Sony update Services)။မိမိရဲ့ဖုန်းကိုSony Update Service နဲ့
လုပ်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့။။ exe.file လေးပါ။
Password If Need : MMAS
Posted by Linn Ko at 12:00 PM No comments:
Android Firmware Download ( Many Firmwares Included )
Firmwares တွေ စုစည်းရာလေးပါ... အတော်များများ ရှိပါတယ်... Link လည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်.... Sony, Sony Errison Samsung, HTC, LG, Asus Micromax, Gapps စသည်ဖြင့် စုံနေအောင် ရှိပါတယ်.
Free Download ကိုရတာပါ.... လှူချင်ရင်လည်း Donate လုပ်လို့ရပါတယ်... အသုံးတည့်စေချင်တယ့်
IDM Portable Version 6.15.7 (Internet Download Manager)
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ အင်တာနက်ကနေ သီချင်းတွေ ၊ ဗီဒီယိုတွေ နဲ့ အခြားဖိုင်ပေါင်းစုံကို အမြဲ Download
လုပ်တတ်သူတွေအတွက် Internet Download Manager Portable v6.15.7 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Internet Download Manager ကတော့ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတော်တော်များများသိကြမှာပါ။
မိုနိုပိုလီဂိမ်းလေးပါ ကစားမယ်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
Install လုပ်နည်းကတော့ ပါလာတဲ့ Setup ဖိုင်ကို Run လိုက်ရင်ရပါပြီ
စက်ထဲမှာ ထည့်သွင်းကစားမယ်ဆိုရင်အောက်မှာ System Requirements လေ့လာပြီးဒေါင်းနော်
Posted by Linn Ko at 11:33 AM 1 comment:
ကဲဒီတစ်ခါမှာ တော့ Top 10 စာရင်းဝင် Antivirus လေးတစ်ခုကို
Free Download လုပ်ပြီး ရက် 600 ကို Free သုံးကြမယ်
အရင်ဆုံး File လေးကို ဒေါင်းပြီး Zip ဖြည်ပါ
Android တွေကို မြန်မာမှုပြုမယ်.... ( Credit to မိုးလုံးပြည့်လျှံ [MMAS] )
English ဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ Application ကို ဗမာစာပြောင်းချင်သူများအတွက် ဗမာစာပြောင်းလဲနည်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Linn Ko at 11:06 AM No comments:
=> Samsung Galaxy S2 GT-I9100
=> Samsung Galaxy S3 GT-I9300
=> Samsung Galaxy S3 LTE GT-I9305
Posted by Linn Ko at 5:01 PM No comments:
Huawei ဖုန်း Android Version 4.1.1 တွေမှာ Root လုပ်စရာမလိုဘဲ Myanmar Font ကို အသုံးပြုလို့ရနေပါပြီ......Theme တစ်ခုတော့ Download ဆွဲရပါတယ်.... ပြီးတော့ SD card ထဲက HWThemes ဆိုတဲ့ Folder ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ... ထည့်ပြီးတာနဲ့ မိမိ ဖုန်းရဲ့ Theme ထဲမှာ
Posted by Linn Ko at 4:23 PM 10 comments:
အသစ်အဆန်းတွေ စိတ်ဝင်စားသူတွေ အတွက်ပါ Facebook မှာ ရုပ်ပုံလှလှ လေးတွေ သုံးကြည့်ရအောင်
စမ်းသာထည့်ကြည့်တော့ဗျာ... အောက်မှာ Codes တွေ... Chat Box ထဲမှာ ဒီ Code လေးတွေကို ရိုက်လိုက်ရင် ပုံလေးတွေ ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဗျ....
Posted by Linn Ko at 4:13 PM No comments:
သိပ်တော့ ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာလိုမယ် မလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်.. ဒါက ရင်နှီးပြီးသားဆိုတော့ ပုံမြင်
ကတည်းက သိနှင့်နေပြီးသား ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်... တစ်ခုပဲ ပိုပြောလိုက်ပါတော့မယ်.... ဒါလေးက ဖုန်း
အတွက်ပါ... Android, iOS အပြင်... Symbian ဖုန်းတွေ အတွက်ပါ ပါပါတယ်.... Download လုပ်ပြီး
Posted by Linn Ko at 3:16 PM No comments:
Labels: Android Application, iOS Application, Nokia
Posted by Linn Ko at 2:25 PM No comments: